၂၀ ဇန်နဝါရီ၊ ၂၀၂၂
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖမ်းဆီမိသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ (ဓါတ်ပုံ ၊ ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့)
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ချင်းရိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ရွှေတြီဂံဒေသထုတ်ခရမ်းရောင်စိတ်ကြွဆေပြားအသစ် အလုံးရေ ၉ သန်း ကို ၂၀၂၂ခုနှစ်စမှာ ဖမ်းမိကြောင်း ချင်းရိုင်းပြည်နယ် အမှတ်(၅) ဒေသ ရဲတပ်ဖွဲ့ က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုဗွီအိုအေသတင်းထောက်မအေးအေးမာကပြောပြပေးပါမယ်။
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ချင်းရိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ၂၀၂၂ခုနှစ်နှစ်ဆန်းမှာပဲ ရွှေတြီဂံဒေသထုတ် ခရမ်းရောင် စိတ်ကြွဆေးပြားအသစ် ၉ သန်းနီးပါးဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ချင်ရိုိင်းပြည်နယ်အမှတ် ၅ ဒေသ ရဲတပ်ဖွဲ့ က ဇန်န၀ါ၇ီလ၁၉ရက်နေ့မှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့တာပါ။
ချင်းရိုင်ပြည်နယ်အမှတ်၅ ဒေသရဲတပ်ဖွဲ့ က ရဲချုပ်Pol. Lt. Gen. Piya Tawichai,ကထိုင်းဘာသာနဲ့အခုလိုပြောသွားပါတယ်။
"အခုဖမ်းမိတဲ့ ခရမ်းပြာရောင် စိတ်ကြွဆေးပြားတွေဟာ ၂၀၂၂ နှစ်နှစ်စပိုင်းမှာ အများဆုံး ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မူးယစ်ဂိုဏ်းတွေကနေ အရောင်သစ်နဲ့ ထုတ်လုပ်လာတဲ့ စိတ်ကြွဆေးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောသွာံးပါတယ်"
ဇန်န၀ါရှီလ ၁၄ရက်နေ့ကချင်းရိုင်ကနေ့မောင်းလာတဲ့ ကုန်တင်ယာဉ်တစ်စင်းကို X ray နဲ့စစ်ဆေးရာမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေထဲဖွက်ပြီး ယူလာတဲ့ စိတ်ကြွဆေး ၂သန်း ၃သိန်းကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ တနေ့ ထဲမှာပဲ ချင်းရိုင်ပြည်နယ် စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ကားတစ်စီးပေါ်မှာလည်း စိတ်ကြွဆေး၆သန်းနဲ့ အတူ မူးယစ်မှောင်ခိုသမားသုံးဦးကိုဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် ။
အလားတူ ချင်းရိုင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကို ဖြတ်သွားခဲ့တဲ့ ကားငယ်နှစ်စီးကိုတော့ ရာခ်ျဘူရီရဲတပ်ဖွဲက ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာမှာ စိတ်ကြွဆေးပြာ နှစ်သိန်း၈သောင်းကို ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် ။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြသသွားတာကတော့ အဓိကမူးယစ်တရားခံလို့ စွပ်စွဲခံထားရသူ ခြောက်ဦးနဲ့ အတူ သူတို့ မောင်းလာတဲ့ ကားတွေ နဲ့ မူးယစ်ဆေး ၈သန်း၆ သိန်းကို ပြသခဲ့ပါတယ်။
အများစုဟာ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ချင်းရိုင် ပြည်နယ်ကနေ ၀င်လာတယ်လို့လည်းပြောသွားပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို ဖြန့် ပေးနေတဲ့ အဓိက နေရာတွေကိုလိုက်လံ ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပြီး ပိုင်ဆိုင်မူ့အဖြစ် ဘတ်ငွေ သန်း ၂၀ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုလည်းနိုင်ငံတော်ပိုင်အဖြစ်သိမ်းဆည်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဖမ်းမိတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေရဲ့ ကာလတန်ဖိုးကတော့ ဘတ်ငွေသန်းပေါင်း၅၀၀၀လောက်တန်ဖိုးရှိတာပါ။
အခုလိုမူးယစ်ဆေးဝါးတွေ သန်းနဲ့ချီပြီး ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဟာ ၂၀၂၂ခုနှစ်စပိုင်းမှာ အလုံးအရင်းနဲ့တင်သွင်းလာနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းထိုင်းရဲတပ်ဖွဲက ဆိုပါတယ်။
အဓိကတရားခံတွေကိုဖေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီးနေရာမှာ အရေးပါတဲ့ မူးယစ်မှောင်ခိုသမားတရားခံတချို့တဖက်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတယ်လို့လည်း ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကိုးကားပြီး ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖေါ်ပြကြပါတယ်ရှင်။
ရှတွေိဂံထုတျ စိတျကွှဆေး အလုံးရေ ၉ သနျး ခငျြးရိုငျမှာဖမျးမိ
ထိုငျးမွနျမာနယျစပျခငျြးရိုငျပွညျနယျထဲမှာ ရှတွေီဂံဒသေထုတျခရမျးရောငျစိတျကွှဆပွေားအသဈ အလုံးရေ ၉ သနျး ကို ၂၀၂၂ခုနှဈစမှာ ဖမျးမိကွောငျး ခငျြးရိုငျးပွညျနယျ အမှတျ(၅) ဒသေ ရဲတပျဖှဲ့က သတငျးထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။ ဒီသတငျးကိုဗှီအိုအသေတငျးထောကျမအေးအေးမာကပွောပွပေးပါမယျ။
ထိုငျးမွနျမာနယျစပျ ခငျြးရိုငျပွညျနယျထဲမှာ ၂၀၂၂ခုနှဈနှဈဆနျးမှာပဲ ရှတွေီဂံဒသေထုတျ ခရမျးရောငျ စိတျကွှဆေးပွားအသဈ ၉ သနျးနီးပါးဖမျးဆီးနိုငျခဲ့တဲ့အကွောငျး ခငျြရိုငျးပွညျနယျအမှတျ ၅ ဒသေ ရဲတပျဖှဲ့က ဇနျနဝါရီလ၁၉ရကျနမှေ့ာ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲလုပျခဲ့တာပါ။
ခငျြးရိုငျပွညျနယျအမှတျ၅ ဒသေရဲတပျဖှဲ့က ရဲခြုပျPol. Lt. Gen. Piya Tawichai,ကထိုငျးဘာသာနဲ့အခုလိုပွောသှားပါတယျ။
"အခုဖမျးမိတဲ့ ခရမျးပွာရောငျ စိတျကွှဆေးပွားတှဟော ၂၀၂၂ နှဈနှဈစပိုငျးမှာ အမြားဆုံး ဖမျးဆီးနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ မူးယဈဂိုဏျးတှကေနေ အရောငျသဈနဲ့ထုတျလုပျလာတဲ့ စိတျကွှဆေးတှဖွေဈပါတယျလို့ ပွောသှာံးပါတယျ"
ဇနျနဝါရှီလ ၁၄ရကျနကေ့ခငျြးရိုငျကနေ့ မောငျးလာတဲ့ ကုနျတငျယာဉျတဈစငျးကို X ray နဲ့စဈဆေးရာမှာ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှထေဲဖှကျပွီး ယူလာတဲ့ စိတျကွှဆေး ၂သနျး ၃သိနျးကိုဖမျးမိခဲ့ပါတယျ။ တနထေဲ့မှာပဲ ခငျြးရိုငျပွညျနယျ စဈဆေးရေးဂိတျကိုဖွတျဖို့ကွိုးစားခဲ့တဲ့ ကားတဈစီးပျေါမှာလညျး စိတျကွှဆေး၆သနျးနဲ့အတူ မူးယဈမှောငျခိုသမားသုံးဦးကိုဖမျးမိခဲ့တယျလို့ဆိုပါတယျ ။
အလားတူ ခငျြးရိုငျစဈဆေးရေးဂိတျတှကေို ဖွတျသှားခဲ့တဲ့ ကားငယျနှဈစီးကိုတော့ ရာချြဘူရီရဲတပျဖှဲက ဖမျးဆီးစဈဆေးရာမှာ စိတျကွှဆေးပွာ နှဈသိနျး၈သောငျးကို ဖမျးမိခဲ့တယျလို့ဆိုပါတယျ ။
သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ပွသသှားတာကတော့ အဓိကမူးယဈတရားခံလို့ စှပျစှဲခံထားရသူ ခွောကျဦးနဲ့အတူ သူတို့ မောငျးလာတဲ့ ကားတှေ နဲ့ မူးယဈဆေး ၈သနျး၆ သိနျးကို ပွသခဲ့ပါတယျ။
အမြားစုဟာ ထိုငျးမွနျမာနယျစပျ ခငျြးရိုငျ ပွညျနယျကနေ ဝငျလာတယျလို့လညျးပွောသှားပါတယျ။
မူးယဈဆေးဝါးတှကေို ဖွနျ့ပေးနတေဲ့ အဓိက နရောတှကေိုလိုကျလံ ရှာဖှနေိုငျခဲ့ပွီး ပိုငျဆိုငျမူ့အဖွဈ ဘတျငှေ သနျး ၂၀ကြျောတနျဖိုးရှိတဲ့ ပစ်စညျးတှကေိုလညျးနိုငျငံတျောပိုငျအဖွဈသိမျးဆညျးခဲ့တယျလို့ဆိုပါတယျ။
ဖမျးမိတဲ့ မူးယဈဆေးဝါးတှရေဲ့ကာလတနျဖိုးကတော့ ဘတျငှသေနျးပေါငျး၅၀၀၀လောကျတနျဖိုးရှိတာပါ။
အခုလိုမူးယဈဆေးဝါးတှေ သနျးနဲ့ခြီပွီး ဖမျးဆီးနိုငျခဲ့တာဟာ ၂၀၂၂ခုနှဈစပိုငျးမှာ အလုံးအရငျးနဲ့ တငျသှငျးလာနတောကွောငျ့ဖွဈတယျလို့လညျးထိုငျးရဲတပျဖှဲက ဆိုပါတယျ။
အဓိကတရားခံတှကေိုဖျေါထုတျဖမျးဆီးနရောမှာ အရေးပါတဲ့ မူးယဈမှောငျခိုသမားတရားခံတခြို့ တဖကျနိုငျငံကိုထှကျပွေးသှားခဲ့ကွတယျလို့လညျး ထိုငျးအာဏာပိုငျတှကေိုးကားပွီး ထိုငျးသတငျးတှမှောဖျေါပွကွပါတယျရှငျ။
မူးယစ်မှောင်ခိုသူတွေကို ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေ ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး
ရွှေတြိဂံမူးယစ်ဆေးအများအပြား နဲ့ မူးယစ်ဂိုဏ်းဝင် ၆ ဦး ထိုင်းမှာဖမ်းမိ
သြစတြေးလျပို့မယ့် မူးယစ်ဆေး ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ နီးပါးဖိုး ထိုင်းမှာဖမ်းမိ